Monday June 21, 2021 - 10:42:01 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: M J Farah
Ugu horeyn waxaan u hambalyeenayaa dhamaan xubnihii ku soo baxay cododkii iyo kuwii aan ku soo bixinba,waxaa iyaguna halbalyo taas la mida leh dhamaanba hawlwadeegadii,codbixiyayaashee,deeq bixiyashaashii kormeerayaasha iyo cidkasta oo ka qaybgashey taaba gelinta doorashada balse Mahad oo dhan waxay u sugnaatey Allah (swt) oo aynu nahay adaamadiisa ogolaanshihiisana wax walba ku dhacaan.
Ugu horey waxa mudan in aynu cadeyno waa maxay wajibaadka shaqo eewakiilku?
Wakiilka xubinta ka ah golaha wakiilada masuuliyadiisa kowaad waa ilaalinta iyo fulinta danaha qarankiisa.
sidoo kale waxaa isna waajib kiisa ka mid ah in uu ilaayo danaha dadkii soo doorteywixii aan ka hor imaneynin Masuuliyadiisa kowaad oo ah danta qaranka.
Ugu dambeyntii hadii uu ka tirsan yahay xisbi siyaasadeed waxaa laga yaabaa in uu ilaaliyo danaha xisbigiisa wixii aan ka hor imaneynin labadaas danood ee hore ee taageeraya.
Danta qaranka ( the national interest[MF1] )
Danta dadkii soo doortey